> Resource > Android > Sida loo Guba Sony Bloggie videos in DVD
The taxane bloggie Sony xambaarsan laba kaamirada cusub ee isafgaradka digital, kuwaasoo mid walba uu awood u qabsaday qurux badan 1080p video at 30fps. Waxaa laga yaabaa in aad areadly lahaa mid ka Sony bloggie fiidiyo sida MHS-TS10, MHS-TS20, MHS-TS55, MHS-TS22, MHS-CM5, MHS-PM5, MHS-FS1, MHS-FS2, MHS-FS3, iwm Oo markaan aad toogtay badan oo videos la, waxaad u badan tahay in ay gubaan Sony bloggie video inay DVD oo bilaash ah meel lagu kaydiyo ka badan ama ka sii xusuusta aad si joogto ah u baahan tahay. In this article, waxaan ku bari doonaa sida si loogu badalo videos ka Sony bloggie fiidiyo ugu DVD-aad. Ka dib markii in, oo aad naftaada ku raaxaysan karaan on your TV shaashad weyn.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi DVD abuure awood badan caawimaad. Taas aawadeed, Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ) waxaa lagu talinayaa. Iyo hagahan ka hooseeya inta badan waxay ku tusaysaa sida loo isticmaalo si ay u abuuraan DVD cajiib ah ka bloggie videos Sony. Waxaa si deg deg ah u shaqeeyo, si fudud oo wax ku ool ah. Waxaad dooran kartaa ka 40+ template DVD menu lacag la'aan ah iyo classic, waayo, waxaad DVD dooro qaar ka mid ah qalabka tafatirka loo baahan yahay in wax ka bedel aad bloggie Sony videos hortiisa ka ololaya. Hadda, fadlan akhri on iyo raac tilmaan-hoose.
1 dejinta aad bloggie videos Sony
Marka hore, xiriiriyaan bloggie fiidiyo Sony si aad u computer via cable, ka dibna dhoofin oo dhan videos aad rabto in aad kombiyuutarka. Marka aad bloggie videos Sony ay hore u kaydiyaa kombiyuutarka, kaliya aad u dajiyaan videos si aad taas Sony bloggie video inay DVD gubi u DVD ku gubanayso.
Si aad u sameyso, waxaad riix "Import" button dhanka bidix ku dedeg gal meesha videos ku kaydsan yihiin, ka dibna iyaga ku shuban. Hadda, ku videos daray tusi doonaa sida thumbnails.
Wakhtigan, haddii aad rabto in aad u habayn si play ah, aad tilmaami karo mid ka mid video horyaalka ka dibna riix "↑" ama "↓". Haddii aad rabto in aad ku darto horyaal oo dheeraad ah, kaliya riix "dar horyaalka" button ee Sababha ah koonaha bidix ee interface ee loo sameeyo.
2 Samee DVD menu iyo edit Sony bloggie videos (optional)
Tani bloggie Sony video inay DVD gubi aad bixisaa badan marto DVD menu lacag la'aan ah iyo qaar ka mid ah qalabka tafatirka anfacaya. Bandhigaan horyaalka video aad rabto in aad wax ka bedel oo dhinaca bidix ka dibna ka dambeeya guji icon tafatir ah. Next, in Video suuqa kala pop-up Edit ah, video dalagga in ay qayb iyagaa midkood ah, jar ka soo qayb aan la rabin, ku dar subtitles iyo watermark, qabsato muuqa, dhalaalka, bedelkeeda, iwm
Marka aad ku dhameysan oo dhan shaqooyin tafatir ah, aad riix tab Menu ku saabsan sare ee suuqa kala app ee. Halkan, waxaad dooran kartaa template DVD menu ah si ay u abuuraan DVD kuu gaar ah menu by Iyada oo thumbnail, qoraal ama ku daray music soo jeeda. Ma doonaysaa in ka badan arrimo DVD menu? Waxaad riix kartaa button arrow hoos u ogolaato inuu soo bixi arrimo menu dheeraad ah oo lacag la'aan ah online.
3 Start Sony bloggie videos in DVD gubashadii
Ka dib marka aad ku eegaan mashruuca oo dhan oo aad ku qanacsan tahay saamaynta, kaliya aad geliso DVD disc maran in DVD drive aad. Ogsoonow in DVD5 iyo DVD9 halkan taageeray. Oo waxyaalahaas ka hor aad go'aansato in aad is geliso DVD5 ama DVD9, ayaa kuu gudbin kara bar cagaaran hoose, taas oo ku tusineysa size tirada guud ee videos daray iyo sawiro.
Markaas, riix "Guba" tab ugu sareysa, ka dibna sax "Guba si disc". Ugu dambeyntii, riix badhanka Gubashada ay u bilaabaan gubanaya Sony bloggie videos in DVD. Marka lagu sameeyey, DVD ah disc Writen si toos ah tuurid doonaa.
Fiiro gaar ah: Haddii mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G oo aadan haysan disc DVD9 ah, kaliya geliso disc D5 ah, barnaamijka si toos ah u cadaadin doonaan.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Your Blackberry in phone HTC ah